Izixhobo ezi-7 eziSebenzisekayo eziPhuculweyo zokuPhucula ukuzibandakanya kweWebhusayithi Martech Zone
Izixhobo ezi-7 eziSebenzisekayo eziPhuculweyo zokuPhucula ukuzibandakanya kweWebhusayithi
NgoLwesithathu, Aprili 17, 2019 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 23, 2021 UJason Grills
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, ukwanda kokusetyenziswa kweendaba zedijithali ngabathengi kutshintshe indlela iinkampani ezithengisa ngayo iimveliso zazo. Amashishini anemizuzu nje embalwa yokubamba ingqalelo yabatyeleli kunye nokulawula amandla abo okuthenga. Ngeendlela ezininzi ezikhoyo kubathengi, umbutho ngamnye kufuneka ufumane umxube owahlukileyo wezicwangciso zentengiso eziya kuqinisekisa ukunyaniseka kwabathengi kuhlobo lwabo.
Nangona kunjalo, zonke ezi zicwangciso ngoku zijolise ekwakheni nasekuqhubekeni ukuphucula ukubandakanyeka kwewebhusayithi. Siqulunqe ezinye zezizathu zokuba ukubandakanyeka kwabathengi kuthathwa njengeyona nto iphambili ngaphandle nje kokuba sisiphelo sazo zonke iindlela zokuthengisa.
Ngokwenqaku elipapashwe ngu Forbes, ngaphezulu kwe-50% yabathengi bayakuvuyela ukuhlawula ipremiyamu ngamava amahle ebrendi
Ngelixa elinye inqaku lipapashwe ngu Lifehack ithi abathengi ababandakanyekayo baya kuhlawula ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-25 ngaphezulu kwabo bangakholwanga
Inqaku elifanayo likaLifehack likwatsho ukuba ngaphezulu kwe-65% yabathengi bathenga iimveliso ezisekwe kunyango lwabo kunye nentuthuzelo kwiindawo ezithile
Nangona iisayithi ezininzi zithandwa, uninzi lwabathengi alonwabanga linani lolwazi olufumanayo ekugqibeleni. Oku kubonisa ngokucacileyo iinkampani ukuba kufuneka zijolise ngakumbi ekunikezeleni ulwazi oluchanekileyo kunye / okanye umyalezo ngexesha elifanelekileyo lokuba nefuthe elibonakalayo. Ukuthathela ingqalelo ukuba uninzi lwewebhusayithi ezikumgangatho ophezulu zifumana ngaphezulu kweendwendwe ezingama-100,000 ngonyaka ngokomndilili, amasebe ezentengiso awunakho ukungahoyi ndwendwe olunye. Ngethamsanqa, kukho izixhobo ezimbalwa ezinokukunceda ukufezekisa ukwaneliseka kwabathengi. Makhe sijonge kubo apha ngezantsi.
Izixhobo eziSebenzayo ezi-7 eziPhucula ukuBandakanyeka kwiWebhusayithi
1. Uhlalutyo: Iindlela zokuthengisa zisebenzisa idatha ukwenza imikhankaso emitsha yentengiso ukuphucula ukubandakanyeka kwabathengi. Enkosi kwizixhobo zohlalutyo, iinkampani ngoku zinokufikelela kumanqaku edatha amaninzi. Iziphumo ezifumanekayo zinokusetyenziselwa ukuyila nokuthumela imiyalezo ebhalwe igama lomntu kubathengi babo kumanqaku amanqanaba amanqanaba okuchukumisa.
Uhlalutyo lweselfowuni njengesixhobo nalo luza kutsalwa. Inye into ekufuneka uyigcinile engqondweni kukuba ukuthengisa, i-IT kunye namasebe okuthengisa kufuneka asebenze kwikhonsathi ukwenza amaphulo amahle. Mkhulu umsebenzi oqhubekayo kule ndawo njengoko iinkampani zijamelene neengxaki ezinxulumene nokuphunyezwa kunye nokubekwa kumajelo eendaba.
2.Ingxoxo ebukhoma: Ingxoxo esebenzayo iba yenye yeendlela ezisetyenziswa kakhulu ziinkampani kwezi ntsuku. Kwaye ukuba yenziwe ngokuchanekileyo kwaye kwangoko, imibutho emininzi ayiyeki kumbono wesoftware yokuncokola. Nangona kunjalo, ngeendlela ezininzi ezikhoyo kwiimarike akukho lula ukuzinza kunye. Kodwa ukuba unesixhobo senkxaso njenge Incoko yeProProfsUkubonelela ngenkxaso yangoko nangoko iba sisiqwenga sekhekhe.
Isoftware yengxoxo ephilayo ivumela abaqhubi bakho ukuba baqonde isimilo sendwendwe kwaye baqale incoko esebenzayo kunye nenqaku elinjengeeNgxoxo zeNgxoxo. Ayikukhuthazi nje kuphela inkxaso yenkxaso yangoko kodwa ikwakha namava enkxaso elungiselelwe wena yeendwendwe. Ngeempawu ezininzi ezisebenza kunye, ishishini lakho linokuqinisekisa ukuhlala kwendwendwe ixesha elide kwaye bagqibezela ukuthengwa ngokusekwe kwiingcebiso zabaqhubi bakho.
3. Inkxaso yeMfonomfono: Iifowuni zeselfowuni ziya zixhaphaka njengoko kulula ukuzisebenzisa kwaye zibonelela ngamava okuthenga aphuculweyo kubathengi. Ngapha koko, abathengisi abaninzi banikezela ngezaphulelo ezixhomileyo kubasebenzisi be-app ukuzigcina zibambeke kwiivenkile zeapp, naxa usiya.
Njengenye yejelo lenkxaso yabathengi, iinkampani ezityala imali kwinkxaso yeapp ziya kuba nakho ukubonelela ngamava afanayo kunye nangaphandle kokuthenga. Qinisekisa ukuba umthengi wakho unike imvume yokufikelela kolu khetho, ukuze ungangeni kumlo osemthethweni.
4. 24/7 Izixhobo zokuXhasa: Kukho izixhobo ezininzi umntu anokuzisebenzisa ukukhulisa ukuthengisa kwiindlela ezininzi. Fumana elungileyo kwaye uyisebenzise ukunceda ukukhokela abathengi nangona inkqubo yesigqibo kunye nokuthenga. Ezi zixhobo zinokuqwalaselwa kwiwebhusayithi yenkampani ukulungiselela ukubandakanyeka kunye nezibonelelo eziphezulu.
5. Amaqonga amajelo onxibelelwanoNjengokuba unewebhusayithi iyimfuneko, kubalulekile ngokulinganayo ukubandakanya abathengi bakho ngokubakho kweendaba zosasazo zasekuhlaleni. Abathengi bathanda ukunxibelelana neenkampani nge-Instagram, Pinterest okanye kuFacebook –uphando lufumene ukuba abantu bayathenga 40% ngaphezulu ukuba umboniso kunye nelayini yebali yemveliso ilungile.
Gcina ukhumbula ukuba akonelanga ukuba neakhawunti kodwa umntu oza kubajonga uyafuneka. Iqela ngokwenyani linokukunceda uphendule yonke imibuzo anokuba nayo umthengi kwaye aphendule kwimicimbi okanye imibuzo ngolwazi olufanelekileyo. Ngokubonelela abathengi bakho ithuba lokufumana ulwazi ngokukhawuleza, awonyusi nje kuphela amathuba okugcinwa kwabo kodwa ukonyusa ukuthembeka kwabo kuphawu lwakho.
6. Uphawu lokufowunela:Amashishini kunye nabathengi kufuneka benze izinto eziphambili ngokubaluleka kwaye iimpendulo zifunwa ngesantya sejethi. Kukho iinkqubo ezinokufakwa yinkampani kwaye ziyisebenzisele abameli beenkonzo ukulawula imigca yokufowuna. Ngelixa abathengi ngamanye amaxesha banokulinda ithutyana ngaphambi kokuba imibuzo yabo iphendulwe, inyani yokuba bazimisele ukuhlala emgceni ibonisa umdla wabo kunye nokuzibandakanya nophawu.
7. Idesika yoNcedo: Esi sesinye sezixhobo ezibaluleke kakhulu ekungafanelekanga ukuba ishishini linikezele ngalo. Sebenzisa inkqubo yamatikiti kunceda ekusombululeni imiba kunye nokubonelela ngeempendulo ezifunekayo ngokukhawuleza. Amatikiti ayindlela elungileyo yokulandela umkhondo ukusuka ekuqaleni ukuya esiphelweni kunye nokubonelela ngesisombululo.
Sebenzisa izixhobo zokuxelwa kwangaphambili kule nkqubo kungangqineka kuluncedo olukhulu njengoko ukuqikelela iingxaki kwangaphambili yinxalenye yenkqubo. Ukufumana iindlela zokujongana nemicimbi kuya kuba lula ngokunjalo. Abathengi bayachukumiseka ukuba ishishini lisebenzisa le nkqubo- luphuculo olukhulu lwentengiso kwaye lulungele ukoneliseka kwabathengi.
Ukusonga Ukusetyenziswa kwezixhobo eziSebenzayo ezi-7 nangaphezulu
Enkosi kubuchwephesha bobuchwephesha, iinkampani ezininzi zivelisa iimveliso ezintsha ezibonelela ngezisombululo ezenzelwe abathengi Abo banako ukuhlala phambili kwendlela ngokutyala imali kwizixhobo ezifanelekileyo, hlala ngaphambili kwikhefu ngokuhlangabezana neemfuno zabaxumi kwaye ubadlula.
Kukho iinkampani zenkonzo ezinokuthi zibonelele ngezi zixhobo zonke kwaye zenze ukuba kube lula ukuba ishishini ligxile kwimisebenzi yalo engundoqo. Kutheni ungasebenzisi ubuchwephesha obukhoyo ukonyusa ukubandakanyeka kwiwebhusayithi yakho, imveliso kunye nokwoneliseka kwabathengi- zonke ngaxeshanye?
tags: uhlala ngcokolainkxaso yeselulaUhlalutyo lwewebhusayithi
UJason nguSr. Umbhali wezoBugcisa okwangoku unxulunyaniswa no Incoko yeProProfs. Uyakonwabela ukubhala malunga neemveliso zenkxaso yabathengi abasakhulayo, imikhwa kushishino lokuxhasa abathengi kunye nefuthe lezemali lokusebenzisa izixhobo ezinjalo. Ekuhambeni kwexesha yakhe nanceba, Jason uyathanda ukuhambela ngokubanzi ukufunda ngamasiko amatsha kunye nezithethe.
Ubume beNcwadana ye-imeyile
I-Extole: Ukukhuthaza uBrand kunye nokuThengisa ngokuThengisa